Sunday December 03, 2017 - 10:59:10 in Wararka by Super Admin
Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur ayaa kulamo kala duwan magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur kula qaatay saraakiisha ugu sarraysa ciidamada Xabashida Itoobiya ee duullaanka ku jooga gobollada Bay iyo Bakool.
Abuu Mansuur ayaa maalmo ka hor markii uu gaaray Xudur wuxuu kulamo albaabada u xiranyihiin laqaatay taliyaha ciidamada Itoobiya ee gobolka Bakool iyo mas’uuliyiinta Maamulka Koonfur galbeed ee isla gobolka waxaana kulamadaas lagu sheegay kuwa gogol xaar u ah shaqa melleteri oo Abuu Mansuur uu uqaban doono AMISOM iyo DF-ka.
Ilo wareed mas’uul ah ayaa SomaliMeMo u sheegay in Abuu Mansuur uu taliska melleteriga Itoobiya ee Xudur ku wareejiyay 6 neef oo Lo’ ah oo uu ugu talagalay in Itoobiyaanku qashaan waxayna aheyd isbarashadii ugu horraysay, sidoo kale saraakiisha maleeshiyaadka Koonfur galbeed ayaa iyana ka guddoomay 6 neef oo Lo’ ah.
Odayaal dhaqameedyo katirsan maamulka Koonfur Galbeed oo Abuu Mansuur kula kulmay magaalada Xudur ayaa sheegay in bilaha soo socda uu isbedel ku imaan doono hoggaanka maamulka Baydhabo balse ma sheegin waxa uu yahay isbedelkaasi.
Siyaasiyiin ku sugan Baydhabo oo aad umucaaradsan Shariif Sakiin ayaa lagasoo xigtay in uu jiro qorshe ballaaran oo xafiiska UN-ka ee Soomaaliya iyo DF-ka ay ku doonayaan in Abuu Mansuur ay ugu dhiibaan Mansab siyaasadeed balse ma sheegin waxa uu yahay mansabkaasi.
Dhinaca kale lagasoo bilaaboi gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha llaa iyo xalay waxaa magaalada Baydhabo ka socday kulamo lagu sheegay muhiim oo u dhaxeeyay Mukhtaar Rooboow iyo taliska ciidanka Itoobiya ee gobollada Bay iyo Bakool, kulanka oo uu dhax dhaxaadiye ka ahaa Cabdi Rashiid wasiirkii hore ee G/dhigga ayaa diiradda lagu saarayay sidii Rooboow uu Itoobiyaanka uga gacan siin lahaa la dagaallanka Xarakada Al Shabaab.
Kulamada oo ka dhacay saldhigyo melleteri oo kuyaal garoonka diyaaradaha Baydhabo iyo xarunta madaxtooyada waxaa sidoo kale ka qeyb ahaa saraakiisha Koonfur galbeed.
Mukhtaar Rooboow ayaa itoobiyaanka la wadaagayay qorshaha cusub ee DF-ka iyo xafiiska UN-ka ee xerada Xalane ugu talagaleen in uu qabto balse illaa iyo hadda ma cadda jagada uu Roobow qaban doono.
Shalay gelinkii dambe ee shalay illaa iyo xalay ayuu Rooboow booqshooyin ku tegayay xeryo melleteri oo kuyaal magaalada Baydhabo halkaas oo ay isku baranayeen saraakiisha maleeshiyaadka maamulka Shariif Sakiin.
Roobow oo horay uga tirsanaa mas’uuliyiinta Alshabaab ayaa la rumeysanyahay in sanaddii 2011 uu isaga tagay xarakada isagoona ku dhowaad 6 sanadood maleeshiyaad ku uruursanayay duleedka Xudur illaa bishii Agoost 2017 xilligaas oo si rasmi ah uu isugu dhiibay ciidamada Itoobiya ee Bakool ku sugan kadibna waxaa loo gudbiyay Muqdisho halkaas oo uu heshiis kula galay madaxda dowladda Federaalka.
Dadka Falanqeeya arrimaha Siyaasadda ayaa aaminsan in Abuu Mansuur uu mari doono halkii ay mareen raggii isaga ka horeeyay oo markii ay safka xoogaga islaamiga ah ka baxeen noqday kuwa aan wax karaama ah ku dhax laheyn bulshada sida Shariif Sheekh Axmed, Axmed Madoobe iyo Yuusuf Indha Cadde.
Lama oga waxa uu Rooboow kusoo kordhin doono maamullada shisheeyaha la shaqeeya ee kajira Soomaaliya basle wuxuusan shaki kujirin in dadka Soomaalida ay ugu yeeri doonaan wixii uu ugu yeeri Jiray madaxdii soo martay Dowladda Federaalka kuwaas oo dhammaantood xulufo la ahaa Itoobiya iyo AMISOM.